Ọmụmụ gemology - Gemological Institute nke Cambodia
Gemology bụ sayensị nke mkpuru ihe, na a pụrụ iche na mkpanaka nke okenye alaka nke sayensị mineralogy. Study gemology ekpuchi niile oru akụkụ nke gemstones na mkpuru ihe. Ha chemical, anụ ahụ na nke ngwa anya Njirimara, na usoro eji maka mmepụta nke mkpuru imitations na synthetics, ọnwụ na polishing nke gemstones, na ndị ọzọ ihe bụ na usoro na ngwá ọrụ njirimara, grading na ịmata otú mmekọrịta gemstones.
Okwu 'na mkpuru ihe onwunwe' na-ekpuchi ihe buru oke ibu nso nke ohere. Kasị mkpuru ihe ndị mineral, kama nke ndị 3000 ma ọ bụ otú, mineral mara mmadụ, naanị banyere 70 na-ahụta ka enweta àgwà ekewet ahụ pụrụ iche Atiya akpọ 'gemstones'.
Anyị na-akụziri gemology maka beginners na Bekee ma ọ bụ French
A isi iwebata ka isi gemstones ọtụtụ ndị dị na Kambodia n'ọma ahịa. Nke a mmalite-larịị N'ezie na-emesi ike mkpa ndị bara uru otú ka rubi, sapphire, zircon, peridot, garnet, topaz, aquamarine, crystalline quartz, chalcedony, obsidian, wdg
Ntinye akwụkwọ: kacha nta 2 ọbịa
Anyị anaghị anabata ntinye akwụkwọ naanị otu ọbịa
- 70 $ kwa ọkara ụbọchị / kwa onye (3 awa)
- 120 $ kwa ụbọchị / kwa onye (2 x 3h = 6 awa)
- 500 $ kwa izu / kwa onye (5 x 6h = 30 awa)
20% ego maka otu (2 ka 4 ndị mmadụ)
30% ego maka otu (5 ụmụ akwụkwọ +)
Biko kpọtụrụ anyị maka ntinye akwụkwọ ozi.
Dr. Mohamed Mohamed TOLBA kwuru ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. 1 ụbọchị (6 awa)
"Na 15 April 2015 m nọrọ a-akpali nnọọ mmasị na-akpali akpali ụbọchị maka amụta a gemological kpụ ọkụ n'ọnụ N'ezie na Gemological Institute nke Cambodia, Mr. Jean-Philippe bụ onye nkụzi m n'oge 6 awa nke na-amụ, Ọ bụ ọkachamara na gemology. M na-eche Gemological Institute nke Cambodia bụ-nri ebe-enweta ihe ọmụma banyere gemology na gemstones. "
Mr. Sergio (site Italy) na Nwada WIRIYA (site na Thailand) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
"Philippe il proprietario è una persona molto competente e professionale nel Campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata na cui CI ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e abụghị ... insomma se volete comprare rubini e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem ewe ihe ubi. Inoltre se volte "- May 5, 2015
Mr. Carl (site England) na Nwada AGYNESS (site na China) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. 1 ụbọchị (6 awa)
Mr. toh hock An (site na Taiwan) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
Nna ukwu Hanz Cua(site na Philippines) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
Nwada Ramya Ponnada & Mr. Krishna Kanth Ponnada (site na India) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
Mr. Sonny Rodriguez & Nwada Tiffany Rodriguez (site na Philippines) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
"Ọ bụrụ na ọ dị mkpa na-ekwe nkwa mkpuru nkume, na-aga ebe a" - m na-achọ azịza banyere mkpuru okwute na-ere ochie ahịa na ebe a nyere m niile informations i kwesịrị ịma karịsịa izi ezi nke bara nnukwu uru. O doro anya na ọtụtụ mkpuru iche na-echekwa na ahịa ga-ere ị adịgboroja omume. Edenyere m aha m ka a 3hour omumuihe na ọ maa broadend m ihe ọmụma banyere gemstones. Ha nyere m akwụkwọ e mesịa ma ọ bụ n'ezie a kwesịrị 3hours. Mr. Jean bụ n'ezie omiiko banyere bara nnukwu uru. Na-elele ha website, kpọtụrụ ha na ha ga-a tuk tuk-eburu gị na gị nkwari akụ. Na nke ọ bụla ị na-enweghị mmasị na-amụ bara nnukwu uru dị nnọọ gara na-ahụ gemstones o nwere ngwa ngwa dị maka ire ere - November 12, 2015
Mr. Thorstein na Mr. Widar (site na Norway) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology. Ọkara ụbọchị (3 awa)
Tom na Kristin (site USA) & Norma na Trevor (site na Canada) ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Konstantin na Silviya (site na Bulgaria).
Miles, July, Rosie, Tilly & Celeste (site England).
Nwada Lee Hui Yun (site na Singapore).
Annick & Maxim (site na Australia).
Jasmine, Bruce & Allan (site na Philippines).
Marc & Lani, Site Los Angeles, California, USA
Nwada Ruth, si Indonesia
Mr. Jeff, si USA
Joshua & Michael, si USA
Stephanie & Mason, site Hong Kong
Gary, Diane & Barb, site USA
Anna & Diana, si Russia
Sok heng, Pui San, Chiew nchikota & Sing Kwan, si Malaysia
"Awesome nleta - adọrọ mmasị ma na anya oghere" - Great ebe ileta! Anyị were 1 hour ihe, nke bịara na-a bit ogologo ruru ka oké ego nke ihe ọmụma a na-akọrọ site Jean. Jean bụ oké na ọ bụghị naanị akọwa dị iche iche nke nkume, ma ahụ oké na-eweta ya ná ndụ n'ime ndị Kambodia onodu nakwa dị ka na nnọọ jụụ akụkọ. Dịkwa nnọọ oké demonstrations ke ụlọ nyocha ebe ị na-esi na-ahụ dị iche iche nke bara nnukwu uru na gbalịa ịghọta ihe onye nke dị adị n'ezie, na-emeso ma ọ bụ sịntetik! E nwekwara oké nhọrọ nke obodo Kambodia bara nnukwu uru ịzụta na nnọọ ezi uche ahịa mgbe ihe. Naa a otutu, nwere a otutu fun na ekpe na a mma Kambodia mkpuru iche na a ọhụrụ hụrụ ekele maka gemology! - February 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, si Greece
Nwada Katherine, si Spain, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Naho, si Japan & William, si UK, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Philip, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, si Denmark, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwada Jerica, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwada Lena, si Ukraine, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
M gara ulo akwukwo ịmatakwu banyere Kambodia nkume. M ga-asị ebe a na-ọma meere niile - ọbịa, nduzi, ọkachamara, buyers. Ebe i nwere ike ịhụ na 'ahụmahụ' niile ụwa nkume. The ọmụma doro anya, ikuku bụ ihe magburu onwe. Ga-amasị m na-ekele Philippe n'ihi mma ihe - March 14, 2016
Javier & Andrea, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Tanya, Sebastian & Scott, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Anyị na 8 afọ nwa tinyere maka a otu awa N'ezie ebe ọ bụ na nnọọ mmasị na ihe bara nnukwu uru, nkume na kristal. Jeanne-Pierre nọrọ ihe karịrị nnọọ ekenyela hour na-ajọ oké ihere na-anụ ọkụ n'obi na isiokwu nke gemmology. Nwa anyị kpamkpam mmasị na N'ezie, dị ka anyị, karịsịa nke nnọkọ na laabu, imata ihe dị iche iche bara nnukwu uru n'okpuru mikroskopu. Obi dị ya ụtọ pụọ na a akwụkwọ na kwa a Praseolite nkume. Daalụ. - March 29, 2016
Sangita & Daniel, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology
Hilary & Ian, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Maria & Joana, si Philippines, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Were ọkara ụbọchị N'ezie na gemological na ulo akwukwo. Ọ bụ nnọọ ihe ọmụma! Mgbe nke a N'ezie, anyị bụ maa 100% ọzọ obi na-adabere na ya kpebie gemstones. - April 8, 2016
O'Malley Family, si USA, mgbe ọzụzụ N'ezie na Gemology.
Silvester & Silvia, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwere ike 12, 2016
Nwada Akemi, si Japan, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwere ike 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, si Philippines, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwere ike 29, 2016
Ma. Luz, si Philippines, & Gordon, si UK, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Nwere ike 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Jamie & Ellie, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Pauline & Ronan, si France, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Sue, Maureen & Bruce, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Anne & Olivier, si France, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Max & Hester, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Carrie & Martijn, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Katherine, si Australia, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Allesha & Ross, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Mr.Thiery, si France, ka dechara ndị ọzụzụ N'ezie nke otu izu (30 awa) ke gemology.
Ali & Joe, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Lenny, anyị nke kasị nta na-amụrụ, si France, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Steven & Jene, si USA, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Fiona & Shah, si England, ka dechara ọzụzụ N'ezie na gemology.
Aislinn & Dominique, site na Hong Kong.
55th Bangkok bara nnukwu uru na jewelery Fair
Ekele Mr Jayesh Patel maka ileta anyị ụlọ nyocha
Ruby kpakpando ruby